Posy sy sarety teny Anosy sy Anosibe : nalan’ireo mpitandro filaminana teny amin’ny arabe | NewsMada
Posy sy sarety teny Anosy sy Anosibe : nalan’ireo mpitandro filaminana teny amin’ny arabe
Nanao be midina tampoka nanala ireo mpitarika posy sy sarety tarihin-tanana teny Anosy sy Anosibe ny mpitandro filaminana, ny asabotsy teo. Nosakanana ireo posy sy sarety rehetra nandeha teny an-toerana ary rehefa nitoby nandritra ny ora roa, nampakarina tanaty fiaraben’ny mpitandro filaminana ary nogiazana mandra-pahaloan’ireo tompony ny sazy nolazaina fa mitentina 40.000 ar.
Mitaraina ireo mpitarika posy sy sarety, noho izany, satria tampoka loatra ary tsy fantatra mazava ny anton’izao fanagiazana izao.
Raha ny fanazavana avy amin’ireo mpitarika sarety sy posy, manofa 5 000 Ar isan’andro amin’ny tompony izy ireo ary izay mba amboniny no miantoka ny fiainan’ny vady aman-janak’izy ireo amin’ny sakafo sy fianaran’ny ankizy. “Tsy manana io 40.000 Ar nolazaina fa tsy maintsy aloa io izy izahay ary koa tsy hanaiky mora foana izao fanagiazana izao”, hoy ireo mpitarika posy sy sarety.
Efa nisy, hoy izy ireo, ny fanamboarana “badge” ho an’ny mpitarika posy sy sarety ary efa natao izany, sady nampiasaina.
Tsiahivina fa efa niteraka korontana teny Anosibe teny ity resaka fanalana ny mpitarika posy sy sarety entin-tanana ity tamin’ny taon-dasa. Nisy mihitsy ny fanapahana ny arabe, ny fitokonana sy ny fankanesana teny amin’ny toby misy ny polisy kaominaly eny Anosiparatrana. Niditra an-tsehatra hatramin’ny Emmo/Reg tamin’ny taon-dasa. Ahina hiverina ny toy izany raha tsy misy ny fanazavana sy ny fandaminana mazava avy amin’ny kaominina momba azy ity.